Diploma in International Financial Reporting (IFRS) – ACCA | YEC
US မှ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်မှုနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာမှ MNCs များ ဝင်ရောက်မှု မြင့်မားလာတော့မယ်။ နိုင်ငံတကာ Company များမှာ လုပ်ကိုင်နေသော Finance and Accounting Professionals များအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်။
ACCA Diploma in International Financial Reporting (IFRS)
Current Program was developed for
2. Finance Specialists
4. Top Managers
5. Auditors who already have skills in preparation and/or auditing of Financial Statements in accordance with local GAAP, and who wish to improve their skills and obtain International Financial Reporting Standards (IFRS) knowledge andalucrative ACCA qualification.
Diploma ကနေ ဘာတွေ ပိုုရလာမလဲ?
Specialists who get certified will gain:
-Deeper understanding of IFRS basic principles and standards
-Knowledge of IFRS requirements in regard to estimates, recognitions, and disclosures of financial reporting elements.
-Skills in preparation of Financial Statements, particularly Consolidated Financial Statements
-Professional judgement in practical implementation of financial reporting standards.
ဒီ program မှာ Exam တစ်ခုသာ ဖြေရမည်။ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) မှ ပေးအပ်သည့် Diploma ရမည်။
The program participants who successfully passed just one exam, will become specialists accredited by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Y.E.C မှ ဆရာဦးကျော်ထင်ဝင်းသည် Diploma in ACCA International Financial Reporting Standards (IFRS) နှင့် ACCA Diploma အတွက် အောင်မြင်သော သင်တန်းသားပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Formally approved ACCA training materials များဖြင့် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Online support for every participants during the training course
Interactive support from trainers for the whole learning process
Online မှ စာမေးပွဲဖြေဖို. Registration အစအဆုံးစီစဉ်ပေးခြင်း။
သင်တန်းကြေး- 250,000/- including study text,old questions and lecturer note.
Exam Fee – UK Pound 185
Exam – June လ ၂၀၁၇ တွင် ရှိမည်။
Saya U Kyaw Htin Win
ဆရာ ဦးကျော်ထင်ဝင်းသည် ACCA ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး Company ကြီးများတွင် Audit လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဆရာ့အနေဖြင်. Economics နဲ့ ပထမဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ACCA (UK) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အပြင် University of Mandalay မှ ပေးအပ်သည့် Master of Business Administration (MBA) ဘွဲ့ရထားသူဖြစ်သည်။
၃၉ လမ်း(ဗန်းမော်တိုက်လမ်း)၊ ရ၁ လမ်းနှင်. ရ၂ လမ်းကြား၊ ရာဇာစင်တာ၊ မန္တလေးမြို့။